Ukuya kwi-UAE, kubandakanya iDubai, i-India kunye namanye amazwe ali-14 eza nezohlwayo eziqatha zeSaudis
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » Ukuya kwi-UAE, kubandakanya iDubai, i-India kunye namanye amazwe ali-14 eza nezohlwayo eziqatha zeSaudis
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
Ngemihla ye-COVID-19 zimbini iintlobo zobudlelwane phakathi kwamazwe. Ngelixa ubudlelwane phakathi kwe-Saudi Arabia kunye ne-UAE engummelwane buhle kakhulu, i-COVID-19 yenze ukuba kube ngokungekho mthethweni kubemi base-Saudi Arabia ukuya e-Dubai, e-Abu Dhabi nakwezinye i-United Arab Emirates-kwaye izohlwayo ziqatha.
Ubukumkani baseSaudi Arabia lilizwe le Abantu abangama-35,393,638. Ukusukela namhlanje, i-522,108 Saudis ibambe i-COVID-19 kwaye i-8200 yafa.
I-Saudi Arabia ikwindawo ye-126 emhlabeni ngokubhekisele kwelona lizwe lihlaselwe yi-COVID kunye nenombolo ye-118 ngokubhekisele kwinqanaba lokufa.
I-Neigboring UAE kunye namanye amazwe ali-15 akukho kuluhlu olubomvu lokuhamba olwenzelwe abemi baseSaudi abanezohlwayo eziqatha ezenzelwe abo bophula umthetho.
Okwangoku, i-11,379 Saudi Arabia i-Arabia yosulelwe yi-COVID-19 kwaye i-1,406 yamatyala alaliswe kakhulu esibhedlele.
Kwiveki ephelileyo uBukumkani babhalise amatyala amatsha angama-8,824, enyuka ukusuka kuma-8,324 kwiveki ephelileyo, nokunyuka nge-6%. Kuphumelele abantu abangama-85, xa kuthelekiswa nama-95 kwiveki engaphambi koko, nto leyo eyehla nge-11%.
I-20% yabemi baseSaudi Arabia bagonyiwe ngokupheleleyo ngokufumana zombini izithonga, enye i-33% ifumene idosi yokuqala.
Abamelwane base-United Arab Emirates bane-69% yabantu bayo abagonywe ngokupheleleyo kwaye i-8.5% eyongezelelweyo ifumene idosi yokuqala.
I-United States xa ithelekiswa ine-49% iye yagonywa nge-7.8% eyongezelelweyo ifumene umpu wokuqala.
Ubukumkani baseSaudi Arabia nangona kunjalo ine-UAE kuluhlu olubomvu lwenza uhambo oluya e-Emirates lulwaphulo-mthetho.
ILibya, iSyria, iLebhanon, iYemen, iIran, iTurkey, iArmenia, iTopiya, iSomalia, iCongo, iAfghanistan, iVenezuela, iBelarus, iIndiya neVietnam zikuluhlu olubomvu lwaseSaudi.
Nawuphi na ummi waseSaudi obanjiwe esiya nakuliphi na uluhlu olubomvu amazwe ajongene nezohlwayo kubandakanya neminyaka emithathu yokuvalwa kohambo.
Ubuphathiswa bucele abemi ngokuchasene nokuhamba ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kumazwe anoluhlu olubomvu apho ubhubhane ungekalawulwa kwaye kukho ukonyuka kwamatyala e-coronavirus eguqulweyo.
Ikwabongoze abemi ukuba balumke kwaye bahlale kude nezo ndawo kukho ukungazinzi okanye intsholongwane isasazeka, kwaye bathathe onke amanyathelo okhuseleko ngaphandle kokuya kwindawo abaya kuyo.
ISaudi Arabia okwangoku ityale imali eninzi ekwakheni icandelo lezokuhamba nezokhenketho nasekuxhaseni umhlaba ngeebhiliyoni zeedola ezixhasa icandelo lezokhenketho.
I-UNWTO, iWTTC, ukomelela kwezoKhenketho, kunye neZiko loLawulo lweCrisis zonke zivule iiofisi eBukumkanini. Xa umhlaba wezokhenketho wawufuna uncedo, USaudi uphendule umnxeba, ebeka uBukumkani esihlalweni senkokeli yehlabathi yeli candelo.
Kwakhona, icandelo lokhenketho kunye nelokhenketho kumazwe e-GCC hnjengoko ndibone ukukhula okukhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Isahluko saseSaudi Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi uqalise IQela lezoKhenketho laseSaudi phulo.